Makore makuru evana
Mwana uye ane hanya naye
Dhinda pamusoro pe nyeredzi
Deredza uremu nemitemo
Ziva iwe pachako
Mhuri uye muchato
Maternity Mwana uye ane hanya naye
Mubereki mumwe nomumwe anoedza kupa mwana wake mufaro uye ave nechokwadi chokuti mwana wake aigara achifara. Uye chii chinogona kuva zvigaro zviri nani zvimedu? Chisarudzo chavo nhasi chikuru, chinongomanikidza basa remasikana nebaba. Munguva pfupi yapfuura, mishonga huru yevana yakakurumbira zvikuru.
Ungasarudza sei motokari yemotokari yakanaka kumwana?
Usati watenga motokari yemana huru, unofanirwa kuziva kuti rudzi rwekugadzira runofanira kuva rwupi. Mamiriro ezvinhu, matori makuru makuru evana anogona kugoverwa mumarudzi maviri: ane motokari motokari uye iyo inotungidzirwa nenzira . Rudzi rwekutanga runodhura, uye kwete mubereki wese anogona kuitenga iro kumwana wake. Zvisinei, iyo mishonga yakakura ine bhatiri iyo inofarira chido chevana vose.
Rudzi rwechipiri rwemotokari huru yemotokari yevana ndiyo yakanyanya kufanana. Muzviitiko zvizhinji, zvinoshandiswa sechinotsiva mutambi. Saka, mienzaniso yakafanana yakafanana mumagadzirirwo awo ane chibatiso chinokubvumira kupinza mwana sebhazi revana. Mishonga yakadaro kunze inofanana nemichina chaiyo, chete mupepe yakaderera uye yevana.
Chii chandinofanira kufunga pamusoro pekutenga?
Chokutanga paunotenga matori makuru evana, unofanirwa kubhadhara kunaka kwezvinhu zvavanenge vaita. Muzviitiko zvakawanda, izvi ndepurasitiki. Izvo hazvishamisi, nokuti iyi nyaya haina mari shoma uye ine simba rakakwana pakugadzira zvidhori zvakadaro.
Unhu hwezvinhu zvakagadzirwa, izvo michina huru yevana veplastiki inogadzirwa, inogona kutsanangurwa nemumwe amai vanozvimiririra. Kuti uite izvi, iwe unofanirwa kunyatsoongorora chekoyi. Kana zvikamu zvacho zvisingaverengeki uye kune kunhuwa kunopinza kubva pachigamba - mhuka yacho inofanira kukonzera kusava nechokwadi.
Kunyanya kukoshesa, kana uchitenga mapurasitiki makuru evana, unofanirwa kubhadhara kunyika yakabva. Nhasi, vazhinji vanogadzira zvinhu vanoenda kune maitiro akasiyana-siyana. Nokudaro, zvakakosha kusiyanisa pakati pezvirevo zve "nyika yekugadzirwa" uye "nyika yekugadzirwa". Nzvimbo yekugadzira inokosha zvikuru uye inotaridzira kunyika iyo chikoyi chakaitwa.
Ndezvipi zvinoita kuti motokari inodzorwa nemotokari ive nevana?
Vanaamai vazhinji, pavanosarudza makirani makuru akachengetedzwa nemhepo, vanotya hutano hwemwana wavo. Zvisinei, mafungu aya haana maturo, nokuti Iyo inoshandiswa mumatayipi akadai, motokari yemodhiyo inoshanda zvikurukuru pamagetsi mashoma, izvo zvisingatauri kukuvadza hutano hwezvimedu. Mune mamwe mazwi, havakwanise kuchinja muviri wemwana kupfuura, semuenzaniso, kombiyuta inoshanda kana terevhizheni.
Nokudaro, kana ukasarudza mwana wako motokari huru, unofanira kutevera mitemo inotevera:
Ongorora motokari zvakanaka musati watenga. Zvikamu zvose zvinofanira kuva zvakashata, zvinotapira, zvakaenzana uye zvakaenzana nekukura.
Ngwarira kunaka kwepurasitiki. Yeuka kuti zvinhu zvakanaka zvitsva hazvigone kushandiswa.
Ikoti inotengwa haifaniri kuva nekunhuhwira uye kuve yakafanana.
Chikoyi chinofanira kufanana nezera remwana, i.e. chikwata chikuru chemotokari chinogona kutengwa kwevana makore 1-3.
Kutevedzera mitemo iri pamusoro apa, chero amai vanogona nyore kusarudza chiyiko kumwana wavo. Kana zvisinei zvipingamupinyi zvinomuka, hazvizove zvisingasviki kutaurirana mutengesi kune mazano. Uyewo, pakusarudza midziyo huru, uye chero chero ipi zvayo yemaipi, zvinokosha kuti ufungisise zvaunofarira zvemakumbo. Kana zvisina kudaro, haazouyise mwana kufara.
Nzira yekuve amai vakanaka sei?
Zvishandiso kubva pahuwandu
Kutamba mitambo mukerekeji
Dzidziso dzepabonde dzevana
Mishonga kubva kumapanga ekare-maputi
Kudzivisa baba vane kodzero dzevabereki
Nzira yekuyamwisa mwana kurara nevabereki vake - nzira dzakanakisisa
Mipikisano pa prom promergarten
Moto Kudzivirira Mitemo Yevana
Nzira yekurapa utsi hwemumumve mumwana?
Vana vane zvidzitiro zvevana zvevana mu1
I-two-lane skates yevana
Sei uchifanira kutora mwana makore mashanu kumba?
Browelia - kukura kubva kumbeu
Clafuti ne cherries
Chii chinodzosera chingwa nekuneta?
Kudzorerwa kwechimiro shure kwechikamu chechiesarea
Nzira yekubika mbira mumusha - zvakavanzika zvekubika nyama yehuta
Dzidzo dzepayipi dzevana 4-5 yekare
Kuroora muRussia vanhu tsika
Chandeliers mu Art Art Deco
Nzira yekubvisa kunhuwa kunobva mumuromo?
Amadini - kutarisirwa uye kugutsikana, mazano anobatsira kune vanotanga
Skewers of gwayana - kamukira
Gerard Piquet naVa Shakira: mhuri idyll
Inetaneti zvakare inokurukura nhaurwa naHarry Styles
Vakadzi vechikwata chematehwe nehuni
Ko manga inokura sei?
Nyaya iyi inofadza yerudo runoshamisa rwehama kune hanzvadzi yake ichaita kuti iwe ucheme!
Nzira yekusarudza musuo wapamberi - ndeupi unhu hunofanira kuva nemukova wehuni?
Cutlets from broccoli
© 2020 sn.tierient.com